Waalidiinteena Khaaliga ahaw:
Wednesday, March 12, 2014 9:15 AM
Gadida ama iibinta dhirta xiligan oo kale sanad kasta ayaa ka mid ah dhaqamada soo jireenka ah ee Barton Open School. Iskaashiga iyo wada shaqaynta ardadeena, shaqaalaha iyo waliba waalidiinta schoolka ayaa hirgaliya qayb wayna ka qaadata sidii lagu kobcin lahaa dhaqaalaha schoolka. Daqliga naga soo gala iibinta dhirtan ayaa wuxuu naga caawiyaa ama noo suurto galiyaa in aan ardadeena u helno barnaamijyo badan oo ku saabsan xaga waxbarashada. Sanadkii la soo dhaafay ayaa iibinta dhirtan waxa schoolkeena ka soo galay lacag gaaraysa $45,000.00. Lacagtaasna waxa ay qayb ka tahay lacagaha sanadkan aan u isticmaalnay wax qabadka ardadeena. Dhaqaalahan iibinta dhirta iyo kuwa kale oo ay maamulaan Barton School Foundation, ayaa ah kuwo aad muhiim ugu ah waxbarashada iyo barnaamijyada aan doonayno in aan u sii wadno ardadeena dhigata Barton. Dhaqaalahan ayaa naga saacida sidii aan ardadeena u siin lahayn wax barasho tayo leh iyo waliba fursado badan oo ay caruurteenu ka faa idaysan karaan. Dhaqaalahan
ayaa sidoo kale loo isticmaalaa wixii ay ardaydu wax ku baran lahaayeen oo ay ka mid yihiin, buugta, qalimaanta, buugta la aqriyo, qalabka miyuusikada, taxi cab fund (oo ah dhaqaale u suurta galiya waalidiinta bilaa gaadiidka ah oo aan awoodin in ay yimaadaan shirka macalimiinta iyo waalidiinta ama caruurta ka qaybqaadata macluumaadaka waxbarasho ee ka baxa schoolka gabi ahaaan oo aan haysan waalid sii qaada) iyo waxkasta oo u suurto galinaya sidii ay ardadeenu
wax u baran lahaayeen. Intaa waxaa sii dheer in macalin kasta loo qoondeeyaa lacag dhan $200.00 sanadkii si ay u isticmaalaan marka ay ka dhamaato wixii ay caruurta wax ku bari lahaayeen. Inkasta oo arimahan
aan kor ku soo xunay ay ka mid yihiin waxayaalaha ugu yar-yar ee uu dhaqaalahani naga saacido waxaad wada dareemi kartaan ama idiin cad sida ay muhiim u tahay iibinta dhirtan si aan u sii wadno waxbarashada wanaagsan iyo fursadaha qaaliga ah oo aan doonayno in ay dhamaan ardadeenu ka helaan Baron School. Waxaan u baahan nahay in aad nagala qayb qaadataan gadida dhirtan! Wax yaabaha noocan ah ayaan u baahan nahay in aad naga saacidaa waayo waalidka la’aantii, waxba nooma
hirgaleen. Waxaa laga yaabaa in aad is waydiinaysid sidee ayaan uga qayb qaadan karnaa? Caruurta ayaa loo soo dhiibi doonaa foomamkii lagu gadan lahaa iyo kaardhka warbixinta. Foomamkan ayaa waxaa la soo diri doonaa Jimahan soo socda oo ay taariikhdu tahay March 14th 2014.
1. Fadlan, ka caawi caruutiina sidii ay uga iibin lahaayeen eheladiina, asxaabtiina iyo
waliba dariskiina. Waxaad soo buuxin kartaa fomka loogu talo galay in aad ku gadato ama
waxaad ka gadan kartaa websitka cinwaankiisu yahay http://bartonopenplantsale.com
halkaana waxaad ka helaysaa faah-faahin ku wajahan sidii aad uga iibsan lahayd dhirtan.
Dhirtan ayaa ah mid aa u wanaagsan kuna anfacaysa in aad ku beeratid gurigaaga
hareerihiisa iyadoo aad ku helaysid qiimo aad u jaban. Kaqayb qaadashadiina ayaa aad
muhiim noogu ah si aan u caawino ardadeena.
2. Fadlan ka sax caruurkaaga fomka (warqada la buuxinayo). Arday kasta waxaa la siinayaa
foomka, fasal kastana wuxuu ku tartamayaa inay intii loogu talo galay gadaan.
Marka arday kasta waa in uu soo celiyaa fomka. Hadii uu foomku qaldan yahay,
waxay noqonaysaa in la soo celiyo. Hadii foomku aysan lacag la socona, waa la soo
celnayaa. Foomamka waxay ardaydu u celinayaan macalinkooda.
3. Waxaa kaloon idinkaga baahan nahay in aad na caawisaan maalmaha dhirta la iibinayo!
waxaan u baahan nahay dad dhirta banaanka soo dhiga ama marka laqaadanayo wax ka
qaybiya. Kuwa dadka wac-waca iyo waliba dad meesha nala kala hagaajiya. Fadlan la soo
xariir Julie Glass-Yaris at julieGY@tche.biz or 612-790-8166 hadii aad na caawin kartid.
o Foomaka waa in la soo celiyaa sida ugu dhaqsaha badan amaba ugu danbayn maalinta
Jimcaha ah ee bisha April ay tahay 11ka, 2014.
o Dhirta waxaa la qaadanayaa Jimcaha sagaalka bisha Maajo (May). Waxaa la qaadan karaa
Labada duhurnimo ilaa iyo Todobada fiidnimo (Friday, May 9th, from 2:00 PM to 7:00 PM)
iyo Sabtida tobanka bisha Maajo 2014 lagabilaabo sagaalka subaxnimo ilaa iyo sedexda
galabnimo(Saturday, May 10th, from 9:00AM to 3:00PM ) waxaana laga qaadanayaa Barton
Sidani waa sida ugu wanaagsan ee aad nagu caawin kartaan kuna kaalmaysaan in uu schookeenu
uu helo dhaqaale uu ku sii socon karo. Waxa kaloo ay tani ku siinaysaa fursad wanaagsan oo aad
kula kulantid macalimiinta iyo waalidiinta schoolka. Wixii faah-faahin ah kalo soco Bugleka oo ah
wargayska todobaadlaha ah eeka soo baxa schoolka. Aad ayaad ugu mahadsantihiin sida aad u
caawinaysaan schoolka si ay ardadeenu u helaan waxbarasho wanaagsan.